YEYINTNGE(ကနဒေါ): Friday, June 11
11 May 2010 ဒိုင်ယာရီ
11 June 2010 yeyintnge Diary.doc
June 2010 yeyintnge Diary.pdf
11 June 2010 Yeyintnge Diary
BY YeYint Nge ... 6/11/20100comment
ကျုပ်တို့ကတလမ်း သူတို့ကတလမ်း ပြီးတော့ ဒီလူတွေကတမှောင့်
အကယ်၍ နအဖစစ်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲကို ၁၀-၁၀-၂၀၁၀ နေ့မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့ မစ္စတာဂျင်ဝပ်က ရန်ကုန်မှာ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ပိုင်းများနှင့် နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့သောကြောင့် သတင်းထုတ်ပြန်လျင် ကျွန်တော်တို့ဖြေသာနိုင်ပါသေးသည်။ ခုတော့မသွားဖြစ်သည့်တောင်မှ ဒီသတင်းကို သူကဖြစ်အောင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်မှာတော့ စဉ်းစားစရာတွေ တော်တော်ရှိလာပါသည်။ သူကားတော်တော်ကြီးကို ရွေးကောက်ပွဲကို ပြုလုပ်စေချင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါသည်။ စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့ရေးကို ရပ်တန့်စေချင်ပါသည်။ ပြီးတော့ ဤရွေးကောက်ပွဲကပင်လျှင် အသွင်ကူးပြောင်းရေးတွေ ၊ ဒီမိုကရေစီလမ်းစတွေ၊ ပေါ်ပေါက်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းပြောဆိုပါသေးသည်။ မည်သည့်အတွက်ဆိုလျှင် NLD မှ ခွဲထွက်သွားသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေများမှာ ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရန် မှတ်ပုံတင်ထားကြသောကြောင့်ဟု ပြောဆိုပါသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း အဘဦးဝင်းတင်က တကောင်ကြွက်လေသံနှင့် ပြောခြင်းဟု ဝေဖန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မှန်ပါသည်။ ဤရွေးကောက်ပွဲကို ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် မဲအများဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က သပိတ်မှောက်ပါသည်။ စည်းလုံးသောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်အဖွဲ့က သပိတ်မှောက်ပါသည်။ သူတို့တွေပါဝင်သော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကောက်မီတီက သပိတ်မှောက်ပါသည်။ သူတို့မှောက်သည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မပါ၍သပိတ်မှောက်ခြင်းမဟုတ်။ အဖမ်းဆီးခံနေရသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကြောင့်မဟုတ်။ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းပါ အချက်အလက်များကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအချက်အလက်များထဲမှ စစ်အစိုးရ၏ အထူးကြောက်ရွံ့သောအချက်အလက်မှာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို တနည်းနည်းဖြင့် အသိအမှတ်ပြုပေးရန်ဆိုသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအချက်မှာ နိုင်ငံရေးအူတိုင်ဖြစ်သည်။ အဖမ်းဆီးခံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးလိုက်ချင်လျင်လည်း လွှတ်ပေးရဲကြပါလိမ့်မည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှ လွှတ်ပေးမည်ဟု စကားခင်းထားပါသည်။ သို့သော် နောက်ထပ် ၁၈ လဆိုသောအကြွေးပြစ်ဒဏ်နှင့် ချန်ထားသောကြောင့် ပျိုးထားသောစကားမှာ တကယ်ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်လာနိုင်ပါလိမ့်မည်။
စစ်အစိုးရကြောက်သည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သူမ မလွပ်မြောက်ခင် ရွေးကောက်ပွဲကို ပြုလုပ်ရန်ရှိပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်သောအခါ နိုင်ငံရေးကျားသေများ၊ ကွက်ကျော်များ၊ခုန်ကူးများ၊အရေခွံထူသူများ၊ ခေါင်းတော်ညိတ်များ၊အရောင်ပြောင်းများ၊ အရေခွံလဲသူများ၊နှင့် ယူနီဖေါင်းကို သေသပ်စွာ ၀ပ်ဆင်သူထားသူများက ပါဝင်ရွေးကောက်ခံကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ သူတို့၏ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါတီပေါင်းစုံ ပါဝင်ပါသည်။ လူပေါင်းစုံပါဝင်ပါသည်။ ပါတီပေါင်းစုံပါဝင်ရေး၊ လူပေါင်းစုံပါဝင်ရေးကို တောင်းဆိုနေကြသူများ ဤအချက်ကို အထူးသတိပြုကြရန်လိုပါသည်။ စစ်အစိုးရသည် မအကြောင်း၊ မထုံကြောင်း၊ မချာကြောင်း သိထားရပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ပါတီပေါင်းစုံပါဝင်သော လူပေါင်းစုံပါဝင်သော သူတို့တွေက မည်သို့မျှ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းကိုမူ ပြောဆို၍ရပါသည်။ သူတို့မှာမည်သို့မျှအရည်အချင်းမရှိကြ၍ဖြစ်ပါသည်။
ကောင်းပါပြီ။ သို့ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့လိုချင်သော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သည် အလှမ်းကွာဝေးနေပေအုံးမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤရွေးကောက်ပွဲကို မလိုလားခြင်း၊သပိတ်မှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဓိပတိနိုင်ငံရေးပါတီများက သပိတ်မှောက်ထားကြသည်ဆိုလျှင် ပြည်သူတွေကလည်း သပိတ်မှောက်ကြရန်လိုသည်။ သပိတ်မှောက်ကြပါဆိုသောစကားကို ပြောဆိုရန်မလိုတော့။ နားလည်ထားဖို့လိုပါသည်။ မဲပေးခိုင်းတော့ မဲပေးချင်ပါသည်ဟု ပြောဆိုသူများမှာ မည်သူ့ကိုမှ မဲမပေးချင်သော စိတ်ဆန္ဒမွေးပေးရန်လိုပါသည်။ အလကားနေရင်း လက်ယားနေမည်ဆိုလျင် နောင်တချိန်ခေါင်းမလှန်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်သွားရပါလိမ့်မည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မပါ၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မရှိ၍ စစ်အစိုးရ၏ပါတီများဖြစ်သော ကြံ့ဖွံ့ပါတီ၊ တစညပါတီများကိုသာ မဲပေးစရာ ရှိပါတော့သည်ဟု ဆိုခြင်းမှာ အဓိပ္ပါယ်မရှိ။ သူတို့ကိုလည်း မဲပေးရန် စိတ်ကူးစရာမလို။ နောက်တခုက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မရှိ၍ ကျနော်ကျမတို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်လာပါသည်ဟု နိုင်ငံရေးသူတောင်းစားများဖြစ်သော ပါတီများက မဲပေးရန်တောင်းဆိုလာမူများကိုလည်း လက်သင့်မခံရန်လိုပါသည်။
ရွေးကောက်ပွဲဆိုသည်မှာ မဲပေး၍ ရသလို မဲမပေး၍လည်းရပါသည်။ ထို့ကြောင့် မဲမပေးဘဲနေကြရန်လိုပါသည်။ မဲမပေးဘဲ တစညဘဲနိုင်နိုင်၊ ကြံ့ဖွံ့ဘဲနိုင်နိုင် ကျုပ်တို့မှာပြောစရာ စကားကြီးတခွန်းရှိနေပါသည်။ ယင်းမှာ ကျုပ်တို့ပြည်သူ သပိတ်မှောက်ထားကြသောကြောင့် ဒင်းတို့တွေကောက်ကျစ်စွာ မဲလ်ိမ် မဲခိုးသောကြောင့် နိုင်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကြေညာပေးရုံဖြစ်ပါသညိ။ သည်လိုဆိုလျင် မဲပေးရန် လက်ယားနေပါသည်ဆိုသော သူတွေအနေနှင့် စိတ်ချမ်းသာရာ ရလိမ့်မည်ထင်ပါသည်။ ယင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကို အနိုင်နှင့် ပိုင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မည်သူမျှမဲရုံသို့ မဲမပေးရန်နေလိုက်ခြင်းကြောင့် အဖမ်းဆီးမခံရချေ။ ကျောင်းသားများလည်း ကျောင်းမှ အထုတ်မခံရ။ အလုပ်သမားများလည်း အလုပ်မှ ထုတ်ပစ်ခြင်းမခံရ။
အကယ်၍ကျောင်းသားထုတို့အနေနှင့်၎င်း၊ အလုပ်သမားထုတို့အနနှင့်၎င်း ရွေးကောက်ပွဲကို အကြောင်းပြု၍ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ၊အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သမဂ္ဂမှတဆင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးရေး မဲမပေးရေးကို ကျောင်းသားထုအချင်းအချင်း အလုပ်သမားထုအချင်းအချင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ျား ချကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် မည်သူ့ကို မဲပေးကြရမည်ဆိုသည်ကို တီဗွီများမှတဆင့် ဆွေးနွေးပြောဆို လွှင့်ထုတ်ပေးနေပါသည်။ ယင်းမှာနိုင်ငံရေးပါတီများက ပုဂ္ဂိုလ်များက မဲဆွယ်နေခြင်းမဟုတ်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ပြည်သူများက တီဗွီအစီအစဉ်များမှနေပြီး နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးပြောဆိုနေကြရာ ပျော်စရာလည်းကောင်း ပညာများလည်း ရကြပါသည်။
တခါတခါ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်များ၊ စာရေးဆရာကြီးများ ဆွေးနွေးပွဲများကိုလည်း ထုတ်လွှင့်ပေးပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲနီးလာလေလေ မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲများမှာ မီဒီယာများ၌ နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပါနေပါသည်။ ယင်းမှာသူတို့နိုင်ငံအတွက် ခေါင်းဆောင်လိုနေ၍ ဤသို့ရွေးချယ်နေရပါသည်ဟု ကြေညာထားသည်ကိုက ချစ်စရာလေးစားစရာဖြစ်ပါသည်။ စကားရည်လုပွဲများဖြင့် တယောက်နှင့်တယောက် မည်သူ့ကိုဖြင့် မဲပေးက ဘယ်လိုဖြစ်သွားမည် ဆိုသည်ကို ဟာသများဖြင့် ပြောဆိုနေကြရာ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာ တွေ့မြင်နေကြရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ တီဗွီများမှ၎င်း၊ ရေဒီယိုများမှ၎င်း၊ သတင်းစာများမှ၎င်း ရွေးကောက်ပွဲအတွက် တားဆီးပိတ်ပင်ထားရာ ယင်းမှာကောင်းသော လက္ခဏာ မဟုတ်ချေ။
ထို့ကြောင့်လည်း တရားဝင်ဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်များကို တောင်းဆိုပြီး အသင်းအပင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့် ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာမိမိတို့ကံကြမ္မာကို မိမိတို့ဖန်တီးပိုင်ခွင့် ရရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခြေအနေအတိုင်းအရဆိုလျှင် အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်ဆိုသည်မှာ ၄ လ ကျော်မျသာရှိတော့သည်။ ယင်း ၄ လအတွင်း ပါတီရုံးဖွင့်ရန် မြို့ နယ်များသို့ သွားရောက်ချိန်ပင်လျှင် အချိန်ကာလ မလုံလောက်ပေ၊ စည်းရုံးရေးကာလဆိုသည်မှာ လုံးဝစဉ်းစားစရာမရှိတော့။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရန်တာစူထားကြသော နိုင်ငံရေးပါတီများသည် တစညနှင့် ကြံ့ဖွံ့မှအပ မည်သို့မျှ တနိုင်ငံလုံးတွင် ရုံးခမ်းတောင်မျှ ဖွင့်နိုင်ရန် အကြောင်းမရှိချေ၊ ပြသနာတခုမှာ အိမ်ခမ်းပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် စစ်အစိုးရမှ ဖိအားပေးခြိမ်းခြောက်မူမျိုးစုံကို ခံနေကြရာ ဆိုင်းဘုတ်ကလေးတင်ဖို့ပင် အချိန်အခက်အခဲ ဖြစ်နေကြကြောင်းကြားနေရသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ၏နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို မသိသော နိုင်ငံတကာမှ အစိုးရများသည် ရွေးကောက်ပွဲကို ပြုလုပ်သောစစ်အစိုးရအား တရားမျှတမူရှိစေရန် တိုက်တွန်းနေပါသည်။
အားလုံးပါဝင်ရေးကို ပြောဆိုနေကြပါသည်။ ပါတီပေါင်းစုံ လူပေါင်းစုံပါဝင်နေပါပြီဟု သူတို့ပြောထားပြီးသောကြောင့် ယင်းစကားကို စစ်အစိုးရ ဖယ်ရှားနိုင်လိုက်ပါပြီ။ ပြည်တွင်းတွင် မည်မျှဖိအားပေးခြိမ်းခြောက်ခံနေရသည်ကို နိုင်ငံရေးသူတောင်းစားများက ပြောဆိုသောစကားကို ကြည့်လျှင် သိသာနိုင်ပါသည်။ သူတို့တောင်မှ မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင့် အချိန်ကာလမလုံလောက်ကြောင်း ပြောဆိုညီးညူနေကြရပါပြီ။
ပြည်သူတို့၏ညီးညူသံများကို နိုင်ငံတကာအစိုးရများနှင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှ မကြားကြမှန်းသိသာနိုင်ပါသည်။ နောက်တခုက ကျွန်တော်တို့၏သပိတ်မှောက်သည်ဆိုသော စကားများကို သူတို့ကြားအောင် မပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းမှာကျွန်တော်တို့ညံ့၍ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာ တခါတခါ စကားများပြောရာ၌ေ၀၀ါးသွားပါသည်။ သပိတ်မှောက်ထားပါသည်။ သို့သော် ပြည်သူတွေကို မတိုက်တွန်းပါဟု ဆိုသောစကားမှာ မလိုအပ်ဟုထင်သည်။ ပြည်သူတွေက နားလည်လိမ့်မည်ဆိုသောစကားသည် လုံလောက်ပါသည်။ ယခုအာရှနိုင်ငံများနှင့် ပါတ်သက်ပြီး အမေရိကန်အစိုးရမှ အထူးစိုးရိမ်နေသာအချက်တခုရှိနေပါသည်။ ယင်းမှာရွေးကောက်ပွဲအတွက် အထူးပြုလုပ်ချင်နေသော ပြသနာဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းတရာကို ဘဏ္ဍာရေးဘက်ဂျက်၌ ဖြည့်စွက်ပေးပါရန် တောင်းဆိုနေကြပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက တရုပ်နိုင်ငံသည် ပို၍သြဇါညောင်းသွားနိုင်စရာရှိသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆကြောင်း ထုတ်ဖေါ်နေကြပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ အမေရိကန်အစိုးရမှ တွန်လန်တော့စ် ဥပဒေကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းဥပဒေအရ ဘက်စုံပိတ်ဆို့ရေးများပါဝင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အရပ်သားအစိုးရပေါ်ပေါက်လာရေးနှင့် အတိုက်အခံများနှင့် စစ်အစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပါဝင်ပါသည်။ သို့သော် ယင်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမူ ယနေ့အချိန်ထိ မခန့်အပ်သေးကြောင်း မစ္စတာဂျင်ဝပ်၏ မစ္စကလင်တန်ပေးစာအရ သိရှိရပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော် ဘက်စုံပိတ်ပင်တားဆီးရေး မပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် တရားဝင်ဗီဇါဖြင့် လာကြသော စစ်အစိုးရနှင့်ပါတ်သက်သူ ဆွေမျိုးသားချင်းတို့မှာ လွန်စွာရှိလာနေပါသည်။
ဘိန်းဘုရင် လောစစ်ဟန်၏မြေးဖြစ်သူ အန်ဒရှူးကျော်မှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က အမေရိကန်နိုင်ငံ ဘောစတွန်မြို့ တွင် ကျောင်းတက်ဘွဲ့ယူခဲ့သည်။သူ့မိခင်မှာဒေါ်သီတာနိုင်ဖြစ်သည်။ အန်ဒရှူးကျော်၏ဖခင်မှာတင်းနစ်ကုတ်ခ်ျဖြစ်သည်။ အန်ဒရှူးကျော်၏ မွေးနေ့သက္ကရာဇစ်မှာ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက် ၁၉၈၆ ခုနှစ်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်နှင့်ဘန်ကောက်မြို့ များတွင် နေထိုင်တတ်ပါသည်။ ရဲမြတ်သူမှာ နေ၀င်းထွန်း၏ ဒုတိယသားအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် တခုခုတွင် ကျောင်းတက်နေပြီး ကနေဒါနိုင်ငံဗန်ကူးဗားမြို့ ၌ ယခုအချိန်တွင် နေထိုင်လျက် ရှိပါသည်။ နောက်တယောက်ဖြစ်သူ ၀င်းမြင့်၏ သမီးဟေမာဝင်းမြင့်မှာ နယူးဇီလံတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော သြစတေးလီးယားနိုင်ငံတက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းတက်ဘွဲ့ယူခဲ့သည်။ သူမ၏မွေးနေ့မှာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက် ၁၉၈၆ ခုနှစ်ဖြစ်သည်။ ယခုလက်ထပ်ပြီး ရန်ကုန်တွင် လောလောဆယ်နေကာ မကြာခင် နယူးဇီလန်သို့ ဗီဇါဖြင့် ထွက်ခွါလာမည်ဖြစ်သည်။ ဦးဝင်းအောင် ၏ သမီးဖြစ်သူ ခရစ်တီးနားအောင် ( အိနှင်းခိုင် )မှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဆေးပညာဖြင့်ဘွဲ့ရသည်။ ယခုလန်ဒန်မြို့ အနီးရှိုမြို့ တမြို့ တွင် ဆရာဝန်ဘ၀ဖြင့် နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ ဦးဝင်းအောင်၏သားငယ် အိနှင်းခိုင်၏မောင် ဖြစ်သူ သူရိန်အောင်မှာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး သူ့ဖခင်၏ ကုမဏီမှာအလုပ်ဝင်လုပ်နေသည် ။ လန်ဒန်မြို့သို့ အကြာမကြာလာတတ်ပါသည်။
သူတို့၏ဗီဇါဖြင့် ပြည်ပသို့ထွက်ခွါလာတတ်ကြခြင်းကို သူတို့၏ရင်းနှီးသောသူများက သတင်းအချက်အလက်များပေးကြ၍ သိရှိကြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စင်စစ်ကျွန်တော်ပြောချင်သည်မှာ စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်အပြိုင် ဗီဇါများကို ပိတ်ဆို့ခြင်းပြုသော်လည်း ဤသူတို့မှာ ဗီဇါရရှိကာ ထွက်လာနေကြဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် သူတို့ကို တားမြစ်ပိတ်ပင် တရားဝင်တိုင်ကြားပြီး သူတို့ရှိနေရာနိုင်ငံမှ နှင်ထုတ်ကြရန်လိုပါသည်။ တခါတခါ သဘောင်္သားဘ၀ဖြင့် သူတို့တွေဝင်လာကြပါသည်။ သူတို့အတွက် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရရှိရန် နိုင်ငံရေးပါတီမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊နိုင်ငံရေးသမားများက စေတနာဗလပွနှင့် ဓါတ်ပုံအတူတွဲရိုက်ကာ မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံတွေရရှိအောင် လုပ်ပေးလိုက်ပါသည်။ လူဝင်မူကြီးကြပ်ရေးရုံးများကလည်း နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် လျောက်ထားသူများကို နိုင်ငံရေးသမားတွေနှင့် ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ခြင်းများ တွေ့ပါက ခိုလှုံခွင့် ပေးလိုက်ပါတော့သည်။ သည်အခါ သူတို့တွေမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ခိုလှုံခွင့် ရှိသွားပြီဆိုသည်နှင့် နိုင်ငံရေးအခန်းအနားတွေ ၊ဆန္ဒပြပွဲတွေကို ယောင်လို့တောင်မှ လှည့်မကြည့်ကြတော့။ အဆိုးဆုံးမှာ ယင်းကဲံ့သို့ဝင်လာကြသည့်အထဲ စစ်အစိုးရနှင့် ပါတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ မည်မျှရှိနေပြီလဲ ဆိုသည်ကို မခန့်မှန်းနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယခုအချိန်တွင် စစ်အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အမေရိကန်အစိုးရမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်သူ မစ္စတာဂျင်ဝပ်က ထောက်ခံကြဖို့ တိုက်တွန်းနေပါသည်။ အရှေ့အာရှနိုင်ငံများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူအရ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချဉ်းကပ်ဆက်ဆံမူအောင်မြင်အောင် အမေရိကန်ဒေါ်လောငွေ သန်းချီ၍ တောင်းဆိုတင်ပြနေပါသည်။ အကယ်၍ ဘတ်ဂျက်ငွေကို သူတောင်းသည့်အတိုင်းချမှတ်ခဲ့ပြီဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရေးသည် ကျွန်တော်တို့ ထင်သလို ကျွန်တော်တို့အတွက် ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ချေ။ သူတို့တွက်ထားသည့်အတိုင်း အရှေ့အာရှမှာ တရုပ်နိုင်ငံ၏ သြဇါမညောင်းရအောင် စစ်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်း၍ရသမျှ လုပ်သွားမည့်လက္ခဏာ ရှိနေပါသည်။ ဤသည်မှာ နှစ်နိုင်ငံအစိုးရတို့၏ ဆက်ဆံရေးဆိုသော သံခင်းတမံခင်းဖြစ်ပါသည်။
အစိုးရဆိုသည်မှာ အဖိနှိပ်ခံပြည်သူများဘက်က ရပ်တည်နေသည်မဟုတ်ဘဲ သူတို့အချင်းချင်းဆက်ဆံပြောဆိုနေကြပါသည်။ ယင်းကြားမှာ အလိုလိုနေရင်း လက်ယားနေကြသော ပြည်တွင်းမှ နိုင်ငံရေးသူတောင်းစားများ၊ ခုန်ကူးသူများကြောင့် ပို၍ဆိုးဝါးရပါသည်။ စင်စစ် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တခုတည်းသောထွက်ပေါက်မှာ ပြည်သူတွေက မဲမပေးရေးဖြစ်သည်။ သပိတ်မှောက်ရေးဖြစ်သည်။ မိမိလက်ထဲမှ မဲကပ်ပြားကို ကိုင်လိုက်မိသည်ဆိုသည်နှင့် စစ်အစိုးရ၏ဘိနပ်အောက်တွင် ပြားပြားဝပ်သွားမည့် အနာဂါတ်က လက်ယပ်ခေါ်နေပါသည်။ ပြည်ပမှ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အထူးပြောစရာရှိပါတော့သည်။ ယင်းမှာ တနိုင်ငံလုံးသပိတ်မှောက် နေသော ဤရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံတကာမှလည်း သပိတ်မှောက်ပေးရန် ပြောဆိုရန်ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် တွန်လန်တော့စ် ၂၀၀၈ ဥပဒေအရ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျ ဖြစ်ပေါ်သော အရပ်သားအစိုးရပေါ်ပေါက်လာရေးကို အကူအညီအသိအမှတ်ပြုရမည်ဟု ပါရှိပါသည်။ ဤအျက်ကို ဇေါင်းပေးပြီး လုပ်စရာရှိပါသည်။
ယင်းမှာစစ်အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှ ဖြစ်ပေါ်လာမည့်အစိုးရကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ထို့ကြောင့် တွန်လန်တော့စ် ဥပဒေအရ ခန့်အပ်လာမည့် မြန်မာနိုင်ငံအထူးကိုယ်စားလှယ်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဘောင်အပေါ် ကျွန်တော်တို့မှာ အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပြီး အချိန်ကို အသုံးချရန်အထူးအရေးကြီးပါသည်။ ယခုအောက်တိုဘာရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်မပြု ဆိုသောအချက်ကို ကျွန်တော်တို့ ရရှိအောင် ကြိုးစားရန်လိုပါသည်။ ပြည်သူတို့ကို တိုက်တွန်းရန်လိုပါသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် စည်းလုံးသောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ မဟာမိတ်အဖွဲ့က ပြည်သူတွေကို မဲမပေးရေး သပိတ်မှောက်ကြဆိုသော မိန့်ခွန်းမျိုးကို ပြောဆိုရန်လိုပါသည်။ နိုင်ငံတကာကိုလည်း သပိတ်မှောက်ကြောင်းကို သိအောင် ပြောဆိုရန်လိုပါသည်။
ကျွန်တော်နှင့် အလွန်ရင်းနှီးသော နိုင်ငံရေးမိတ်ဆွေတဦးက စိတ်မရှည်နိုင်လာတော့၍ ဤသို့မှတ်ချက်ပေးပါသည်။ သူ့မှတ်ချက်မှာ မှန်သည်ဟုထင်ပါသည်။
ကျုပ်တို့ကလည်းတလမ်း၊ သူတို့ကလည်းတလမ်း ပြီးတော့ ဒီလူတွေက တမှောင့် --
ပင်းပက်တောင်စီမံကိန်း နျူကလီးယားနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်
ဇွန်လ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်။ သောကြာနေ့
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့အနီး ပင်းပက်တောင်သတ္တုတူးဖေါ်ရေးနှင့် သံမဏိစက်ရုံစီမံကိန်း သည် မြန်မာ့စစ်အစိုးရ နျူကလီးယားလက်နက်စီမံကိန်းအစီအစဉ်နှင့် ဆက်စပ်နိုင်ကြောင်း ယင်းအကြောင်းကို စောင့်ကြည့်လေ့လာနေသည့် ခွန်ချန်ကီက ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်သို့ ပြောသည်။
ပင်းပက်စီမံကိန်းဒေသတွင် သုတေသနလေ့လာရေးပြုလုပ်စဉ် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများနှင့် ဒေသခံရွာများ ပြောပြချက်အရ ပင်းပက်တောင်တွင် ယူရေနီယံသတ္တုထွက်ရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းနေရာတ၀ိုက်တွင် လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားပြီး ရွာသားများဝင်ထွက် သွားလာခွင့် ပိတ်ပင်ထားသည်ဟု ခွန်ချန်ကီက ပြောသည်။
ယင်းစီမံကိန်းအား ရုရှားနိုင်ငံအစိုးရပိုင် Tyazhpromexport ကုမ္မဏီနှင့် အီတလီနိုင်ငံမှ DLE ကုမ္မဏီတို့ ၀င်ရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံထား၍ ထွက်ရှိသည့် သတ္တုများကို ၎င်းနေရာတွင်ပင် သန့်စင်မှုပြုလုပ်ပြီး မကွေးဖက်သို့ ပို့ဆောင်သွားသည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းအတွင်းတွင် နအဖ နျူကလီးဆိုင်ရာ စစ်တပ်အရာရှိ ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်း ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာပြီး လျှို့ဝှက်ယူဆောင်လာသည့် မြန်မာ့စစ်အစိုးရ၏ နျူကလီးယားလက်နက် ထုတ်လုပ်ရန် ကြိုးစားနေသည့် ဓာတ်ပုံနှင့် မှတ်တမ်းအထောက်အထားများအား Al Jazeera ရုပ်မြင်သံကြားသတင်း အစီအစဉ်မှ ထုတ်လွင့်ပြသခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံးမှ ထုတ်ဝေသည့် “Robbing the future” (အနာဂါတ်ကို လုယူဖျက်ဆီးခြင်း) အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာအတွင်းတွင် ပင်းပက်တောင်ဒေသတွင် လုံခြုံရေးတင်းကြပ်စွာ ချထားသည့်အခြေအနေ၊ ဒေသခံရွာသားများနှင့် ပင်းပက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ ပြောချက်နှင့် ရုရှားမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နျူကလီးယားသုတေသနပြုလုပ်သည့်ဌာနဆောက်လုပ်မည့် သဘောတူညီမှု စသည်အချက်တို့ကို ထောက်ပြပြီး ပင်းပက်တောင်သည် နျူကလီယားအတွက် ယူရေနီယံသတ္တုများ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ဖေါ်ပြထားသည်။
ထို့အတူ ပင်းပင်ဒေသအနီးတွင် စစ်တပ်ကွန်ပြူတာနှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် နှစ်ခု တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ယင်းတက္ကသိုလ်တွင် တာဝန်ကျလုပ်ကိုင်နေသည့် ရုရှားပြန်စစ်ဗိုလ်များအား ပင်းပက်တောင် သတ္တုတူးဖေါ်ရေးစီမံကိန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည်ဟု ယင်းအစီရင်ခံစာက ဖော်ပြထားသည်။
The Voice Weekly Vol. 6-30, June 14-20, 2010.
ကျုပ်တို့ကတလမ်း သူတို့ကတလမ်း ပြီးတော့ ဒီလူတွေကတမှေ...